Valentina naSeamly2D: maviri anoratidza kuti iwe unofanirwa kuziva kana iwe uchida fashoni | Linux Vakapindwa muropa
Valentina Chiratidziro chekuti iwe unogona kunge usati wanzwa zvakanyanya nezvazvo, kana pamwe iwe wakambove. Iyo yemahara software yeavo vanogadzira avo vanoda kudhirowa yavo fashoni mapfekero mapfekero. Zvichida kubatsira kwayo ndosaka usati wazvinzwa zvakanyanya, nekuti iko kushandiswa hakusi kungowanzo gadzira fashoni uye zvipfeko zvigadzirwa sezvimwe zvimwe zvirongwa zvezuva nezuva. Nekudaro, kune avo vese vanozvipira kune izvi zvehunyanzvi kana kungo fadza.
NaValentina iwe uchave uine yakapusa chirongwa neGUI iyo inokutendera iwe gadzira zvigadzirwa zvako uye ita kuwanda kwezviyero uye mapatani, kunyangwe ichichinja zvinoenderana nemunhu, saizi, nezvimwe. Pakati pezvishandiso, unogona kuve nemidziyo yekudhirowa iyo inobvumidza iwe kugadzira iwo mucheka wenguo, pamwe nevamwe kuita mamwe marudzi ezviyero, nemikana yemhando dzazvino, pamwe nekumwe kusona kweVictorian, uye kubva kune vamwe mazana emakore. Naizvozvo, hachisi chinhu chete chembatya dzazvino, asiwo kuvapa vintage kana yekare-nguva inobata.
Iyo projekiti yeValentina, ine iri zita rinoratidza iro rine chokwadi chekumutsa chiuru cheruvhunzo pakati pea couturiers, rakakamurwa muchikamu chechipiri cha2017 uye mapurojekiti maviri akafanana akagadzirwa, ndiko kuti, imwe forogo. Iko kumwe kusimudzira inonzi Seamly2D. Kupatsanurwa kunouya senguva dzose nemisiyano pakati pevanogadzira kana nekungotsvaga dzimwe nzira dzausingakwanise kuita mubazi razvino. Nekudaro, iwe unogona kurodha pasi Seamly2D kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti pasina matambudziko akakura, kuve nekuwedzera zvinyorwa ipapo kana uchizoida pamwe nerumwe ruzivo nezve chirongwa.
Ndinoziva kuti pamwe iyi mhando ye software haina kufarirwa kana kukosheswa sedzimwe mhando, asi ini ndaona iri curious uye ibasa rangu kuzivisa avo vaverengi vakazvipira kune ino fashoni niche, kuve nehungwaru dhizaini uye corte yemapatani. Kune dzimwe nzira, asi vazhinji vangangove vasina kuziva kuti iyi imwe sarudzo yaivepo mukati me software repertoire yeGNU / Linux nyika ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Valentina naSeamly2D: maviri anoratidza iwe unofanirwa kuziva kana iwe uchida fashoni
Alex nava akadaro
Unogona kundipa zano pane "dzimwe nzira" dzaunoziva nezve kutema nekugadzira mapatani?
Pindura kuna Alex nava